Fitsangatsanganana ataon'ny Emirates, Emirates Fly | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | fiaramanidina, soso-kevitra
Iray amin'ireo seranam-piaramanidina malaza indrindra eto an-tany Emirates ary ireo izay mbola tsy nanana fotoana nitetezana azy dia azo antoka fa maniry izany. Ao amin'ny tontolon'ny seranam-piaramanidina malalaka sy miovaova tsy misy isalasalana ity kaompaniam-pitaterana arabo ity dia isan'ireo voalohany.
Nanana fotoana afaka nitete in-dimy aho ary tamin'ny roa tamin'izy ireo dia niampita an'izao tontolo izao aho satria avy tany Amerika atsimo nankany Tokyo, ka noho ny sidina ora maro dia afaka namorona -kevitra momba ity orinasa ity sy ny serivisy atolotray sy omeny. Eto ianao manana, mety mizara azy na tsia.
2 Kilasy toekarena Emirates
3 Kilasy orinasa Emirates
Manao kely ny tantaran'ny Emirates no mpitondra ny saina any amin'ny Emira Arabo Mitambatra ary ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka lehibe indrindra any Moyen Orient. Ny ivon-toerany dia ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Dubai manerantany.
Emirates manidina amin'ny tanàna 74 amin'ny kaontinanta dimy ary tombanana ho 3500 XNUMX ny sidiny isan-kerinandro no miampita ny lanitra amin'ny planeta. Hatramin'ny nananganana azy dia nisy hatrizay ao amin'ny Top 10 amin'ireo zotram-piaramanidina malaza indrindra, miaraka amin'ny fiaramanidina tsara kokoa sy ny isan'ny mpandeha noentina. Tsy ny zotram-piaramanidina rehetra no miasa ny làlan'ny varotra lava indrindra eto an-tany ary iray amin'izany i Emirà.
Ny sambon'izy ireo dia an'ny marika Boeing sy Airbus, na dia Boeing 777. ny Airbus A380 goavambe dia ilay fiaramanidina malaza misy takelaka roa na dabilio roa manaraka ny fiaramanidina iray manontolo (ny boeing-boeing kely Boeing dia misy rihana roa ihany aloha.) Izy io dia afaka mitondra mpandeha 853 ary izy io no fiaramanidina lehibe indrindra manerantany. Nandritra ny fotoana fohy dia ilay fiaramanidina nanarona ny lalana Dubai - Tokyo, ka amin'ny herintaona dia tsy maintsy ankafiziko izany.
Ny Emirates dia mampiasa dolara tsara amin'ny fitrandrahana solika, noho izany tamin'ny 2013 dia fiaramanidina 200 no nilanja azy. tsy misy mihoatra ary tsy misy zavatra kely noho izany. Misaotra ny andiany voalohany sy ny serivisy omeny dia nahazo loka marobe teo amin'ny sehatry ny fiaramanidina ary afaka milaza isika fa a seranam-piaramanidina kintana efatra, faharoa an'ny Qatar Airlines ihany.
Kilasy toekarena Emirates
Antsoina koa hoe kilasy toekarena io no kilasy be olona indrindra amin'ny fiaramanidina rehetra. Emirates dia nampiroborobo azy io ho kilasy tena ahazoana aina ary miaraka amina serivisy, gastronomika ary fialamboly, mihoatra ny kilasy iray ihany amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka hafa.
Tamin'ny diako voalohany tany Emirates dia naniry mafy ny hahalala izany aho. Ny marina dia gaga tamim-pifaliana ny kalitaon'ny serivisy an-tsambo. VOALOHANY ny seza dia azo fidina sy voatokana raha vantany vao novidiana ny tapakila. Na dia fahita ankehitriny aza taona vitsy lasa izay dia tsy izany no izy.
Iray amin'ireo serivisy avoakan'ny orinasa ny gran toerana eo anelanelan'ny laharan'ny seza Economy Class ary marina izany. Hevitra miampy lehibe. Raha mpandehandeha somary matetika ianao dia takatrao avy hatrany hoe maninona ny lehilahy lava no mandeha milamina kokoa. Ny iray amin'ireo entana lafo vidy indrindra dia ny ICE na manaparitaka serivisy fialamboly. Tsy nanomboka ny sidina rehefa nirehitra ny efijery ary sahirana izy ireo amin'ny fampiroboroboana ny katalaogin'ny sarimihetsika, fandaharana amin'ny radio, fanadihadiana ary mozika feno tokoa azon'ny mpandeha izany.
Ohatra, tamin'ny volana aprily 2014 dia afaka nankafy ilay horonantsary aho The Program (momba ny hazakazaka am-bisikileta Lance Armstrong), sarimihetsika izay vao niseho tamin'ny rafitry ny fahitalavitra mandoa vola tamin'ny herinandro lasa. Ary tamin'ity taona ity aho dia nahita ny sarimiaina Kimi no wa, tena vaovao. I Emirà no seranam-piaramanidina voalohany nampiditra an'ity rafitra fialamboly manokana ity tamin'ny taona 2003 ary nanomboka tamin'izay dia nahazo loka maro izy.
Tsy ny habetsahana ihany fa ny kalitao satria ny sarimihetsika sasany dia premieres ary tsy mifantoka amin'ny Hollywood o Eoropa fa manolotra izy ireo anaram-boninahitra avy any Moyen Orient, Korea Atsimo, Sina, Japon ary India, ohatra. Misy sarimihetsika maherin'ny zato sy sasany, fantsom-pahitalavitra 60 eo ho eo, fantsona horonan-tsary maro hafa, lalao video dimampolo ary fantsom-peo marobe.
Etsy ankilany, io rafitra io ihany no ahafahanao mahita ireo sary nalaina avy tamin'ny fakantsary napetraka ety ivelan'ny fiaramanidina Ka na dia eo am-panidinana aza dia tsy misy zavatra mahaliana hita, ny fiaingana sy ny fipetrahana dia manana ny hakantony. Ary raha manam-bola ianao dia afaka manao ny serivisy koa Haingam-pandeha amin'ny Internet izay mampiasa satelita amin'ny sidina.
Ary ahoana ny amin'ny sakafo? Fantatsika fa ny sakafo amin'ny fiaramanidina dia tsy ny tsara indrindra ary tsy afaka milaza isika fa mahafa-po izany. Raha ny raharaha Emirates, ny habe sy karazany ary ny hoe hanafaka anao izy ireo cutterie metaly ary tsy plastika. Matsiro ny lovia fa ny zavatra tsara indrindra dia ny raha misy sidina lavitra dia mamela ny sarety misy zava-pisotro sy snacks ho an'ny mpandeha tonga any an-dakozia ireo tompon-trano.
Etsy ankilany, omena a lamba firakotra sy headphone. Tamin'ny 2014 dia nanome kely ahy ihany koa izy ireo tranga miaraka amina ba kiraro, borosy nify ary paty nify. Nahavita nanangona tranga efatra aho, roa teny an-dalana ary roa teny an-dalana hiverina, fa rehefa nanao dia nitovy aho tamin'ity taona ity dia tsy nomen'izy ireo ahy izany tranga voatahy izany. Ataoko angamba fa tsy nanatitra an'io intsony izy ireo. Fiovana iray hafa tsikaritro fa raha tamin'ny 2014 aho dia tsy mila mandoa denaria mba hisafidianana ny seza amin'ity taona ity dia nampandoaviny vola aho, 50 dolara eo ho eo.
Mety hieritreritra ianao fa tsy mendrika ny mandoa be loatra ny hamandrihana fa rehefa mihoatra ny 30 ora ny dia tianao dia misafidy ny seza misy anao. Ny Boeing 777 dia manana laharana vitsivitsy misy seza roa manoloana ny rambony ary ireo dia tsy isalasalana fa ny tsara indrindra rehefa manantena mihoatra ny andro fitsangatsanganana ianao.
Kilasy orinasa Emirates
Soa ihany aho fa nandeha tamin'ny asa aman-draharaha fa tsy satria nandoa izany fa noho ny andiana olana izay niaretako tamin'ny diako farany. Fiaramanidina simba, 48 ora ao Rio de Janeiro, sidina ampiasain'i Iberia ary rafitra ICE izay tsy mandeha amin'ny lalana miverina amin'ny lalana Tokyo - Dubai no nanome toky ahy fa hitsambikina amin'ity kilasy mahafinaritra ity. Tokony handefa orinasa daholo isika!
Taorian'ny fialonana an-taonany maro an'ireo olona vitsivitsy izay niditra tamin'ny fiaramanidina talohanao, nanao akanjo tsara sy maivana, dia afaka nanao toy izany koa aho tamin'ny farany. Ary rendrarendra tokoa! Tsy izany ihany miditra amin'ny fiaramanidina ianao alohaMamaky varavarana hafa ianao ary tsy mahita olona avy amin'ny kilasy toekarena mihitsy. Farafaharatsiny amin'ny fiaramanidina Kilasy Voalohany. Mamaky an'i Primera ianao, eny, ilay rahavavin'ny Business. Ireo Emirates dia mivoaka amin'ireo kilasy roa ireo rendrarendra volamena be, fomba arabo tsara.
Amin'ny raharaham-barotra ny seza dia tena mahazo aina ary manana toerana maromaro, even manamboatra fandriana izy ireo matory. Ny ondana dia manana kalitao tsara kokoa, hentitra kokoa ary omena anao izy ireo boaty misy ny vokatra Bulgari ao anatiny: ranomanitra, fanosotra, fitaratra, sela, borosy nify, fanosotra miharatra, tohotra. Miarahaba anao izy ireo a vera ny champagneay alohan'ny sakafo tsirairay omena anao a sakafo. Ireo mpampiantrano no nametraka ny latabatra ho anao ary eto tsy misy fitoeram-plastika na rakotra aluminium foil: vilany vita amin'ny crockery daholo izany. Manolotra anao aza izy ireo mofo mafana!
Manana ianao takelaka elektronika hampiasa ny ICE mipoitra amin'ny sisin'ny seza io ary ny headphone dia manana kalitao tsara fa tsy ny plastika Turista mahazatra. Ary eny, raha toa ianao ka manana ny endrika mandoa ny vidinao, dia manompo anao amin'ny fomba tampony ireo tompon-trano. Manazava izany aho satria tsy anjarako izany. Mba hamaranana dia nanana traikefa roa mifanohitra amin'ny diametrika aho amin'ny lafiny fitsaboana ny mpiasa Emirates.
Ny hevitro manokana dia izany orinasa lehibe izy io nefa mahagaga ny zava-drehetra Saingy ny olana iray dia tsy ny olana hafa rehetra: ny fitsapatsapa, ny fieboeboana, ny fitombon'ny sakafo any amin'ny Subway fa tsy ny valiny mazava sy ny olana maromaro. Ny orinasa lehibe iray dia tokony ho lehibe koa amin'ireny fotoana ireny ary tsy haneho fahasosorana amin'ireo fanontaniana na fitarainan'ny mpandeha ao aminy. Nandeha nitety an'i Emirates ve ianao? Ahoana ny hevitrao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » fiaramanidina » Fitsangatsanganana ataon'ny Emirà, Emirà Manidina